Uluhlu lwezixhobo zoThengiso lwamaShishini amaNcinci lowama-2014 | Martech Zone
Ngaba i-2014 ingangunyaka apho sonke siyeke ukuleqa izinto ezikhazimlayo kwaye sibuyele kwiindlela zokuthengisa eziyinyani? Mfana, ndiyathemba njalo… sabona iinkampani ezininzi zisukelana nezinto ezithile kule minyaka imbalwa idlulileyo. Ngelixa uhlahlo-lwabiwo mali lomile kungekho ziphumo, yiyo loo nto baya kuthi ekugqibeleni basinike umnxeba. Kwakukuninzi kakhulu ukuba kungabalwa kwaye kwajika isisu sam sabukela ezinye zeenkampani zetekhnoloji kunye neearhente zikhupha uburharha kwaye zithatha iitoni zemali kuhlahlo-lwabiwo mali oluninzi lwamashishini amancinci anyanisekileyo.
Ngokutsho j2 UPhononongo lweHlabathi Jikelele:
I-28.16% ifuna ukwandisa ubukho bayo kwi-Intanethi, njengokumisela iwebhusayithi okanye ivenkile ekwi-intanethi.
I-23.61% ifuna ukwamkela ukuthengisa nge-imeyile ukuzenzekelayo ukufikelela ngokulula nangokufanelekileyo kubathengi.
I-20.52% ifuna ukusebenzisa i-imeyile ukukhuthaza ngokufanelekileyo ukuhanjiswa kunye nokwabelana kwinethiwekhi yoluntu.
I-13.76% ifuna ukumilisela ezona ndlela zintengiso zihamba phambili ze-imeyile kunye nokwenza iwebhusayithi isebenze.
I-11.05% ifuna ukuqinisekisa ukuba iinzame zabo zokuthengisa nge-imeyile azipheleli kwiifilitha zogaxekile okanye kwiithebhu zeGmail.
Ndinomdla wokwazi apho iindlela zokuthengisa ividiyo bebekwisifundo. Ukuba bekukho umsantsa kwimbono yam, ibiya kuba kukuba amashishini amancinci ngoku angarhuma kwinani leenkonzo zentengiso zevidiyo ezifikelelekayo ukuze umyalezo wazo uphume. Oku kuyakubanceda ukuba bakhuphisane nohlahlo-lwabiwo mali olukhulu kakhulu kunolwabo kwaye baphumelele.
tags: Uluhlu lweminqweno luka-2014emailj2 Kwihlabathij2 Uqikelelo lwehlabathij2 UPhononongo lweHlabathi JikeleleUkuThengiswa kweMfono kunye neThebhulethiurhwebo mobileShishini
Umsebenzi weNtengiso yeVidiyo